လူတစ်ယောက်က လိုအပ်တာထက်အရက်ပိုသောက်မိနေပြီ၊ မကြာခဏအရက်သောက်ချင်စိတ်ဖြစ်နေပြီ၊ အရက်သောက်ဖို့ကို “No” လို့ပြောဖို့ခက်နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ကိုသင် အရက်ဖြတ်ဖို့ သုံးသပ်သင့်နေပါပြီ။ ရေရှည်မှာဆိုရင်တော့ လွန်လွန်ကျူးကျူးအရက်သောက်ခြင်းက ကျန်းမာရေးအရ မကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး သင်အရက်ကိုချက်ချင်း ဖြတ်ချင်သော်လည်းပဲ ချက်ချင်းဖြတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောခရီးကို ခြေတစ်လှမ်းနဲ့စလှမ်းသလိုပါပဲ။ ၁) တစ်နေ့နည်းနည်းလျှော့သောက်သွားပါ။ သင်က တစ်နေ့လုံးလိုလိုအရက်သောက်ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး အရက်သောက်ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း သောက်မိနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ သေချာတယ်သင်အရက်စွဲနေပါပြီ။ သင်တကယ်အရက်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် တစ်နေ့သောက်နေကျပမာဏထက် တစ်နေ့နည်းနည်းလျှော့သောက်သွားတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ၂) အစားများများစားပါ။ သင်အရက်မသောက်ခင်မှာ အစာများများစားပေးပါ။ အဲဒါက သင့်ကိုဗိုက်ပြည့်စေတဲ့အတွက် သင့်ရဲ့အရက်သောက်မယ့်ပမဏကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ၃) အရက်သောက်တဲ့ပမာဏကို မှတ်သားထားပါ။ အဲဒါက သင်ဘယ်လောက်ပမာဏတောင်ပိုသောက်မိနေသလဲဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင်ကိုသိသွားစေနိုင်ပါတယ်။ အရက်စွဲနေတဲ့သူအများစုက အရက်ကို မကြာခဏသောက်နေတတ်တာကြောင့် ပမာဏကို လုံးဝမမှန်းနိုင်တာကြောင့်လဲပါပါတယ်။ သင်တကယ်အရက်ပြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်သောက်နေကျပမာဏကို မှတ်ထားလိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ပုံမှန်ပမာဏထက်လျှော့သောက်ဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ပါ။ ၄) အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ အရက်သောက်ဖို့ ဆွယ်တတ်သူတွေကို ရှောင်တာအကောင်းဆုံးပါ။ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ကြုံလို့ တစ်ခါတစ်လေအရက်သောက်ဖြစ်တာမျိုးက သိပ်ပြဿနာမရှိပေမယ့် အမြဲလိုသောက်ဖြစ်နေတာကတော့ သင့်ဘဝမှာ ပြဿနာဖြစ်လာပါပြီ။ အဲဒီ့တော့ တစ်ခါတစ်လေသောက်တာပဲဆိုပြီး လာဆွယ်တတ်တဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားငြင်းပစ်ပါ။ ၅) ရေသောက်ပါ။ အရက်သောက်ပြီးတိုင်းရေများများသောက်ပစ်တာက သင့်အစာအိမ်ကို မြန်မြန်ပြည့်အင့်စေတဲ့အတွက် အရက်သောက်ချင်စိတ်လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ အရက်လည်းမမူးစေတော့ဘဲ သင့်ကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်လာပါတယ်။ ၆) အချိန်ဇယားလုပ်ထားပါ။ တစ်ပတ်လုံးမှာ သင်အရက်သောက်မိတဲ့နေ့ကို ဇယားမှာ မှတ်ထားတာမျိုးလုပ်ပါ။ အဲဒါက အခြေအနေမှန်ကို သင့်ကိုယ်တိုင်လည်း သိသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ၇) အားကစားလုပ်ဖို့အချိန်ပေးပါ။ အားကစားလုပ်ဖို့ အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားပါ။ အားကစားလုပ်ခြင်းက သင့်ရဲ့အရက်သောက်တတ်တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပိုပြီး ဝေးကွာစေသလို တခြားသောအရာတွေမှာ အာရုံစူးစိုက်မှုပိုကောင်းလာစေတဲ့အတွက် အရက်သောက်ဖို့တောင် အာရုံမေ့လျော့စေနိုင်ပါတယ်။ ၈) ကိုယ့်ကိုကိုယ်အလိုမလိုက်ပါနဲ့။ အရက်သောက်ချင်စိတ်ပေါ်လာတိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်အလိုမလိုက်မိပါစေနှုင့်။ အရက်သောက်ချင်စိတ်တစ်ခါပေါ်လာတိုင်း တစ်ခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အလိုလိုက်မိတာက သင့်ရဲ့အရက်စွဲလမ်းမှုကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါတယ်။ ၉) သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ လုံးဝကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်မထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူး။ တကယ်လည်း အရက်ကိုဖြတ်ချင်နေပါတယ် ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အထက်ပါအချက်တွေကို ကျင့်သုံးကြည့်ပြီး အရက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါစေ။#BAWA101
ကျန်းမာရေး ပျော်ရွှင်သောဘဝ လူနေမှုဘဝ
သူငယ်ချင်းတွေက မကောင်းတာတူတူလုပ်ဖို့ အဖော်ညှိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
လူမှုဆက်ဆံရေးဝန်းကျင်မှာ ကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းမျိုးကော မကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းမျိုးကော တွေ့ကြုံလာရမှာပါ။ ကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းမျိုး ကြုံလာတာက ပြဿနာမဟုတ်ပေမယ့် မကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းမျိုးနဲ့ ပေါင်းသင်းမိရင်တော့ ပြဿနာဖြစ်နိုင်သလို ကိုယ့်ကိုလည်း ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ မကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းမျိုးနဲ့ ကြုံလာရတဲ့အခါ ဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲဆိုတာလေးတွေဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁) ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းပါ။ မကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းမျိုးက မကောင်းတာလုပ်ဖို့ပဲသင့်ကိုအဖော်ညှိမှာပါ။ အဲဒီ့အခါ သင်လုပ်သင့်တာက ပြတ်သားစွာ ငြင်းဆန်ဖို့ပါ။ အားနာပါးနာနဲ့ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်အဖြေပေးမိတာမျိုးကို သူတို့က သိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါဆွယ်လို့မပါပေမယ့် နောက်တစ်ခါဆို ပါနိုင်တယ်ဆိုရင် ထပ်ဆွယ်နေအုံးမှာပါ။ အဲလိုမဖြစ်ရအောင် တစ်ခါတည်း ပြတ်သားစွာငြင်းပစ်လိုက်ပါ။ ၂) မလုပ်သင့်ကြောင့်ဖျောင်းဖျကြည့်ပါ။ တစ်ချို့အပေါင်းအသင်းမျိုးကတော့ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှင်းပြလိုက်ရင် နားဝင်တတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်ရာလုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးပါ။ အဲလိုအပေါင်းအသင်းမျိုးကျတော့ ဖျောင်းဖျလို့မရတတ်တဲ့အတွက် လွှတ်ပေးထားလိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်။ လောကမှ အမှားကို မှားမှန်းသိပြီး ပြင်တတ်သူမျိုးက အပေါင်းအသင်းလုပ်သင့်တဲ့အထဲမှာပါပြီး မှားမှန်းသိလျက်မပြင်တတ်သူနဲ့ အမှားကိုလုံးဝကို နှစ်ခြိုက်စွာကိုင်စွဲထားတတ်သူမျိုးကိုတော့ လုံးဝမပေါင်းသင့်ပါဘူး။ ကိုယ်ပေါင်းသင်းနေတဲ့ အပေါင်းအသင်းထဲမှာ ဒုတိယအမျိုးအစားလူမျိုးပါလာခဲ့ရင် သတိထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကိုယ်ပေါင်းစိတ်ခွာနေသင့်တဲ့သူမျိုးပါ။ အဲဒီ့တော့ မကောင်းတာလုပ်ဖို့ဆွယ်တဲ့သူကို မလုပ်သင့်ကြောင်းပြောပြကြည့်ပါ။ အမှားကိုသိလို့ အမှန်ပြင်သွားတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိပါတယ်။ ပြောကြည့်လို့မှ လုံးဝကိုမပြင်မယ့်သူမျိုးဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကခပ်ဝေးဝေးနေ ရှောင်လိုက်ပါတော့။ တစ်ခုရှိတာက လူငယ်တွေမှာ အတွေးတစ်ခုရှိတတ်ပါတယ်။ သူလုပ်တာ ကိုယ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပါ၊ ကိုယ်ကမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ သူနဲ့တော့ ဆက်ပေါင်းနေအုံးမှာပဲ…..သူငယ်ချင်းက သူငယ်ချင်းပဲဆိုတာမျိုးပေါ့။ အဲဒါက တစ်ချို့ပြဿနာတွေအတွက်မှန်နိုင်ပေမယ့် တစ်ချို့ပြဿနာမျိုးကျတော့ ကိုယ့်အတွက်ပါအရမ်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ။ မူးယစ်ဆေး၊ စိတ်ကြွဆေးလို ပြဿနာမျိုးပါ။ သူက မူးယစ်ဆေးသုံးတယ်၊ ကိုယ်ကလုံးဝမသုံးဘူး၊ သူ့လက်ထဲမူးယစ်ဆေးလို၊ စိတ်ကြွဆေးလိုမျိုးက အမြဲရှိနေမှာပါ။ ကိုယ်ကမလုပ်ပေမယ့် မတော်တဆဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါ ကိုယ်ပါ ရောပါသွားနိုင်တာမျိုးပေါ့။ သတိထားရမှာက နောင်တရပြီး ပြန်ပြင်နိုင်မယ့်ကိစ္စမျိုးက တော်သေးနိုင်ပေမယ့် နောင်တရပြီး နောင်တသာ ပိုက်ထားရမယ့်ကိစ္စမျိုးကတော့ ဝေးဝေးရှောင်သင့်ပါတယ်။ ထိုကိစ္စမျိုးမှာ မိတ်ဆွေစစ်မရှိနိုင်ပါဘူးနော်။ ၃) ထိုနေရာကနေချက်ချင်းထွက်သွားပါ။ ထိုသူငယ်ချင်းမျိုးက ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘဲ အခြားသူတွေကိုလည်းအဖော်ညှိထားတတ်ပါသေးတယ်။ အခြားသူငယ်ချင်းတွေပါနေရင်တောင် ကိုယ်က မပါသင့်ပါဘူး။ ပြီးတော့ မကောင်းတာအတူလုပ်ဖို့ အတူတိုင်ပင်ထားတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကြားထဲမှာ ကိုယ်က ဆက်မနေသင့်ပါဘူး။ သူတို့ကို မလုပ်ဖို့ ဖျောင်းဖျကြည့်ပါ။ မရရင်တော့ သင်လည်း ထိုနေရာကနေ အမြန်ဆုံး လမ်းခွဲတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ၄) ထိုကဲ့သို့အပေါင်းအသင်းမျိုးကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ အဲလိုမျိုး မကောင်းတာလုပ်ဖို့ အဖော်လာညှိတဲ့သူငယ်ချင်းမျိုးကို နောက်လုံးဝမပတ်သက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ခင်မင်မှုသံယောဇဉ်ကြောင့် အားနာပြီး ဆက်လက်ပေါင်းသင်းမိရင် ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့လုပ်သမျှ မကောင်းမှုထဲမှာ တစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါ ကိုယ်အဆစ်ပါသွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မပါရင်တောင် ဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတာမျိုးဆို ကိုယ်ပါ မယုံမကြည်ဖြစ်တာမျိုးခံရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဝေးဝေးကရှောင်တာအကောင်းဆုံးပါ။ ၅) မိဘတွေကို အကူအညီတောင်းပါ။ လုံးဝရှောင်ကျဉ်မရအောင် အကြပ်ကိုင်တာမျိုးကြုံလာတဲ့အခါ မရရအောင် ရုန်းထွက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကမိဘများကို ပြောပြပါ။ အကြပ်ကိုင်တာမျိုးဖြစ်လာရင် ရှောင်နိုင်အောင် စောင့်ကြည့်ပေးဖို့နဲ့ ကျောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အပြင်မှာဖြစ်ဖြစ် လာကြိုပေးတာမျိုး ကူညီပေးဖို့အကူအညီတောင်းပါ။ အထက်ပါအချက်တွေကတော့ ယေဘုယျရှောင်ရှားနိုင်တဲ့အချက်လေးတွေပါ။ အခြေအနေနဲ့အချိန်အခါပေါ်မူတည်ပြီး ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးတွေ၊ အပေါင်းအသင်းဆိုးတွေနဲ့ ကင်းဝေးကြပါစေ။ #BAWA101
စွမ်းရည် ပျော်ရွှင်သောဘဝ လူနေမှုဘဝ
စာဖတ်ချင်စိတ်ပျောက်နေရင် ပြန်စိတ်ပါလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
“The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ ll go” – Dr. Seuss “စာတွေများများဖတ်လေ သင်သိတဲ့အရာတွေပိုများလာလေပဲ၊ သင် ပိုပြီးသင်ယူလာနိုင်သလို၊ နေရာစုံကိုလည်း သင် ရောက်ဖူးသွားတာပါပဲ။” လို့ စာရေးဆရာDr. Seuss က ပြောထားပါတယ်။ ထိုစကားလေးက မှန်ပါတယ်၊ စာအုပ်တွေများများဖတ်ခြင်းက သင့်ကို သင်ယူစရာတွေအများကြီးကို သင်ပေးနိုင်သလို၊ နေရာစုံကိုလည်း သင်ရောက်ဖူးသွားမယ်၊ သင်မသိသေးတာတွေလည်း စာအုပ်တွေထဲက ပိုသိသွားမယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးက ပြောမပြနိုင်အောင် များပြားလှပါတယ်။
စွမ်းရည် လူနေမှုဘဝ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ပျော်ရွှင်သောဘဝ
အောင်မြင်သောသူများတွင် တွေ့ရသော နေ့စဉ်လုပ်လေ့လုပ်ထရှိသော အကျင့်ကောင်းများ
အောင်မြင်သူတွေနဲ့ ပုံမှန်လူတွေမှာ မတူညီတဲ့အချက်တွေရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်သာ လူတကာထက်အောင်မြင်သူတွေဖြစ်လာတာမဟုတ်လား။ သင်ကော အောင်မြင်သူတွေက ဘယ်လိုအခြေခံအကျင့်ကောင်းတွေ နေ့စဉ်ကျင့်သုံးပြီး အောင်မြင်လာကြသလဲဆိုတာ မသိချင်ဘူးလား။ အောင်မြင်သူတွေနေ့စဉ်လုပ်လေ့လုပ်ထရှိသောအကျင့်ကောင်းလေးတွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်နော်။ ၁) နေ့စဉ်စာဖတ်ခြင်း အောင်မြင်သူတွေမှာ နေ့စဉ်စာဖတ်ချိန်သတ်မှတ်ထားပြီး စာဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းကြောင့် သူတို့ရဲ့ဘဝမှာပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေတာတွေသိလာနိုင်သလို၊ အသိပညာ ဗဟုသုတတွေ အမြဲရှာမှီးပြီးသားဖြစ်နေစေပါတယ်။ အောင်မြင်သူတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့နေ့စဉ် အသိပညာ၊ ဗဟုသုတတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရစေဖို့ အမြဲစာဖတ်တတ်ကြပါတယ်။ ၂) မနက်စောစောထတတ်ခြင်း အောင်မြင်သူတွေက နေ့တစ်နေ့ရဲ့ မနက်ခင်းဟာ တစ်နေ့တာအတွက် စီစဉ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မနက်ကိုစောစောထပြီး ကိုယ့်အတွက်အချိန်ပိုယူတတ်သလို စီစဉ်စရာကို ခေါင်းအေးအေးနဲ့စီစဉ်တတ်ကြပါသေးတယ်။ ၃) အချိန်ဇယားဆွဲထားတတ်ခြင်း၊ ဘယ်အလုပ်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုး လုပ်ခါနီးမှ ဇဝေဇဝါဖြစ်မနေရအောင် ကြိုတင်စီစဉ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ တစ်နေ့တာလုပ်ရမယ့်အလုပ်များကို အချိန်ဇယားဆွဲထားတတ်သလို၊ တစ်လစာလုပ်ရမယ့်အလုပ်များ၊ နှစ်ပြည့်ရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ ပုံစံတကျဘဝကိုဖြတ်သန်းတတ်ကြလို့ အောင်မြင်ကြတာပါ။ ၅) အချိန်ကို စီမံတတ်ခြင်း အောင်မြင်သူတွေက သာမန်လူတွေထက်အောင် အလုပ်များတတ်ကြပါတယ်။ အဲလိုများပြားတဲ့အလုပ်တာဝန်တွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီပြီးဆုံးအောင်လည်း လုပ်နိုင်ဖို့ အချိန်ကို စီမံတတ်ကြပါသေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် အချိန်ကုန်သက်သာပြီး အလုပ်လည်းမြန်မြန်ပြီးလို့ အောင်မြင်သူတွေက အောင်မြင်သထက်အောင်မြင်လာတာပါ။ ၆) နေ့စဉ်ရည်မှန်းချက်သတ်မှတ်ထားခြင်း၊ လစဉ်ရည်မှန်းချက်သတ်မှတ်ထားတတ်ခြင်း နေ့စဉ် ပြီးဆုံးသင့်သော ရည်မှန်းချက်သတ်မှတ်ထားတတ်ပါတယ်။ အဲဒါမှ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြီးဆုံးလား၊ မပြီးဆုံးလား ရှင်းလင်းစွာသိမြင်လာတဲ့နောက်တော့ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ ရှင်းလင်းစွာသိမြင်လာမှာပါ။ ၆) အတွေးအခေါ်အကြံဉာဏ်များ ဖလှယ်တတ်ခြင်း သာမန်လူတွေက လူတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပြီး အောင်မြင်သူတွေကတော့ အကြံဉာဏ်တွေအကြောင်းဆွေးနွေးတတ်ကြပါတယ်။ အောင်မြင်သူချင်းလည်း ရန်သူပြိုင်ဘက်လို့ ဘယ်တော့မှမမြင်တတ်ကြဘဲ မိတ်ဆွေဖွဲ့တတ်ကြပြီး မိမိရဲ့အသိအမြင်နဲ့ အခြားသူရဲ့အသိအမြင်ကို ဖလှယ်ပြီးကိုယ်တိုင်ရဲ့အသိအမြင်ထပ်တိုးပွားအောင် ပညာယူတတ်ကြပါတယ်။ ၇) မိမိထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာသာ အာရုံစိုက်ခြင်း အောင်မြင်သူတွေက သူတို့မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာ အချိန်ကုန်ခံပြီး ညည်းတွားမနေတတ်ကြပါဘူး။ သူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာသာ အလေးအနက်အာရုံစိုက်ပြီး တိုးတက်အောင် လုပ်မယ့်နည်းလမ်းကို ရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။ ၈) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း အောင်မြင်သူတွေက ရေရှည်မှာ ဆက်လက်အောင်မြင်ဖို့ ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလည်း သိကြပါတယ်။ ကျန်းမာရေးလည်း လိုက်စားတတ်ကြပါသေးတယ်။ ၉) ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်အောင် စားသောက်တတ်ခြင်း ကျန်းမာရေးအရေးကြီးကြောင်းသိသလို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်မျှတအောင်လည်း စားသောက်တတ်ကြပါတယ်။ ၁၀) အခြားသူများကို ခွင့်လွှတ်တတ်ပြီး၊ ချီးကျူးတတ်ခြင်း အောင်မြင်သူတွေမှာ အခြားသူတွေကို ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့အကျင့်လည်းရှိတတ်ပါသေးတယ်။ အခြားသူများရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုတတ်ကြပြီး ချီးကျူးတတ်ကြပါသေးတယ် ၁၁) ဘဝအတွက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ချမှတ်တတ်ခြင်း သူတို့ဘဝမှာ ဘာဖြစ်လာရမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက် တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ အဲလိုသတ်မှတ်ထားတတ်ပြီး ဖြစ်မြောက်အောင်လည်းလုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ ၁၂) ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်သုံးသပ်ခြင်း နေ့စဉ်လိုလို သူတို့ကိုသူတို့ပြန်လည်သုံးသပ်တတ်ပြီး အမှားရှိရင်လည်း ချက်ချင်းပြုပြင်တတ်ကြပါသေးတယ်။ အဲလို အမြဲကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်သုံးသပ်တတ်ခြင်းကြောင့် ဘာတွေလိုအပ်နေလဲ၊ ဘာတွေထပ်လုပ်ရမလဲ၊ ဆိုတာမျိုးကို ပြန်မသုံးသပ်တတ်သူထက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှင်းလင်းစွာပြန်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ၁၃) ပြောင်းလဲ၊ ပြင်လွယ်ခြင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြုပြင်ယူဖို့ နောက်မတွန့်တတ်ကြပါဘူး။ ပြောင်းလဲပစ်ဖို့လည်း ဝန်မလေးတတ်ကြပါဘူး။ အမှားတစ်ခုတွေ့တာနဲ့ ချက်ချင်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်ဖို့၊ ပြုပြင်လိုက်ဖို့ ဝန်မလေးတတ်ကြလို့လည်း အောင်မြင်တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် အောင်မြင်သူတွေရဲ့အကျင့်ကောင်းလေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း လိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်လို့ရပါတယ်။ အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲလာတာကိုလည်း အံ့အားသင့်ဖွယ်မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်။ #BAWA101
စွမ်းရည် ပျော်ရွှင်သောဘဝ လူနေမှုဘဝ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား
ကျောင်းချိန်ပြီးသွားလျှင် ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ဘာတွေဆက်လုပ်သင့်ပါသလဲ။
ခုလက်ရှိ ခေတ်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေက မြန်ဆန်လွန်းတဲ့အတွက် ခေတ်ကိုအမှီလိုက်နိုင်ဖို့ကို အချိန်နဲ့တပြေးညီကြိုးစားလာကြရပါတယ်။ အဲဒီ့အခါ ကျောင်းသားလူငယ်တွေလေးတွေပါ ခေတ်ကိုအမှီလိုက်နိုင်ဖို့ ကျောင်းချိန်ပြီးတာနဲ့ အခြားနည်းပညာသင်တန်းများ၊ ဘာသာစကားသင်တန်းများပါ တက်ထားကြရပါတော့တယ်။ အချိန်နဲ့တပြေးညီတိုးတက်ချင်လာတာနဲ့အမျှ အချိန်နဲ့တပြေးညီ ဖိစီးလာကြတော့တာပါပဲ။ ကျောင်းချိန်ပြီးတာနဲ့ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး၊ ကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက် ဆက်လုပ်သင့်တာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁) စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်နားပါ။ ကျောင်းမှာ စာတွေကို အာရုံစိုက်လာရတဲ့အတွက် အိမ်ရောက်တဲ့အချိန်တစ်နာရီလောက်ကို စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်အနားယူသင့်ပါတယ်။ အဲဒါမှသာ နောက်ထပ်အာရုံစိုက်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာ အာရုံစူးစိုက်မှုအားကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းကပြန်၊ တခြားသင်တန်း တန်းတက်၊ ကျူရှင်ဆက်တက် စသည်ဖြင့် လုပ်လိုက်ခြင်းက ဦးနှောက်ကို ပိုပြီး ဖိစီးလာအောင်လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဦးနှောက်ရဲ့အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းကျဆင်းလာပါတယ်။ ၂) ရေချိုးပါ။ ရေချိုးပစ်လိုက်တာက လန်းဆန်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဆက်လုပ်မယ့်အလုပ်တွေကိုလည်း အာရုံစိုက်မှုပိုကောင်းပါတယ်။ ၃) စာဖတ်ပါ။ စာဖတ်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကို စာအုပ်တွေက ထိန်းကျောင်းပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်ရင်း အလိုလိုသုံးသပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သူ့ဘဝမှာ သူ့ကိုယ်သူသုံးသပ်ဖို့ အကျင့်ရပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မကောင်းတာလုပ်မိရင်တောင် ပြုပြင်ဖို့ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ စိတ်ကိုလည်း တည်ငြိမ်စေတဲ့အတွက် စာဖတ်တဲ့ကလေးက အလိုလိုတည်ငြိမ်ပြီးသားဖြစ်နေစေပါတယ်။ ၄) သီချင်းနားထောင်ပါ။ စိတ်အပန်းဖြေဖို့အတွက် သီချင်းနားထောင်ပါစေ။ ကျောင်းကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ တစ်နာရီနှစ်နာရီခန့်က သူတို့စိတ်ကြိုက်လုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်ပေးထားခြင်းက စာလုပ်သင့်တဲ့အချိန်မှာ စာလုပ်ဖို့အတွက် ပိုပြီးနာခံတတ်စေပါတယ်။ အဲဒီ့တော့ စိတ်အပန်းဖြေဖို့သီချင်းနားထောင်တာမျိုးလုပ်ခွင့်ပေးပါ။ ၅) အားကစားလုပ်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုလုပ်ပါစေ။ သူတို့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အားကစားတစ်ခုခုလုပ်ပါစေ။ ဘောလုံးကန်တာမျိုး၊ ကြက်တောင်ရိုက်တာမျိုး၊ ရေကူးတာမျိုး၊ ဘောလီဘောပုတ်တာမျိုး စသည်ဖြင့် တစ်ခုခုကို စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်ပါစေ။ အဲဒါက သူတို့ကို စိတ်ဖိစီးမှုကနေ လွတ်မြောက်စေပါတယ်။ ၆) ဝါသနာပါရာ တစ်ခုခုလုပ်ခွင့်ပေးပါ။ သီချင်းရေးတာ ဝါသနာပါရင် သီချင်းရေးတာမျိုး၊ ပန်းချီဆွဲတာ ဝါသနာပါရင် ပန်းချီဆွဲတာမျိုး၊ သူဝါသနာပါရာတစ်ခုခုကို ဖန်တီးခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလေးလုပ်နေရတဲ့အတွက် ပင်ပန်းတယ်လို့မထင်ဘဲ အပန်းဖြေသလိုဖြေစေပါတယ်။ စိတ်ကူးဉာဏ်လည်း ကွန့်မြူးလာနိုင်ပါတယ်။ ၇) မိဘကို ဝိုင်းကူခိုင်းပါ။ အမေဟင်းချက်နေတဲ့အချိန် သားသမီးကို ဝိုင်းကူခိုင်းတာမျိုးက မိဘနဲ့လည်း ပိုပြီး နွေးထွေးချစ်ခင်လာနိုင်သလို အမေဖြစ်သူ အိမ်အလုပ်တွေအလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ အကူအညီဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဟင်းချက်ရင်း ဘယ်လိုချက်ပြုတ်ရတယ်၊ ဘာတွေထည့်သုံးရတယ် စသည်ဖြင့် သူတို့နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပြောပြရင်း သင်ပေးပြီးသွားဖြစ်သွားစေမှာပါ။ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းတာမျိုးလည်း လုပ်ခိုင်းလို့ရပါသေးတယ်။ အဲဒါမှ နောက်ဆို မိဘကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ သူတို့အသိစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့သူတို့ လုပ်ဖြစ်သွားမှာပါ။ ၈) အပင်စိုက်ခိုင်းပါ။ သားသမီးအတွက် ကိုယ်ပိုင်အပင်လေးတွေစိုက်ခွင့်ပေးပါ။ ပန်းပင်လေးတွေ၊ သီးပင်စားပင်လေးတွေစိုက်တာမျိုးပေါ့၊ သူတို့ကိုယ်ပိုင်အပင်ကို သူတို့ဂရုစိုက်မိတဲ့အချိန်ဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေပြေလျော့စေတဲ့အချိန်ပါပဲ။ ပန်းပင်လေးတွေဆိုလည်း ပန်းပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာ ရတဲ့ခံစားချက်မျိုး၊ အသီးအနှံလေးတွေ သီးပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာ ရတဲ့ခံစားချက်မျိုးကို ခံစားတတ်သွားရင် စိတ်ဓာတ်လည်း နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသွားတတ်ပါသေးတယ်။ သဘာဝကိုခံစားတတ်တဲ့စိတ်တွေ၊ အပင်တွေကို ချစ်ခင်တတ်တဲ့စိတ်တွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စိမ်းလန်းစိုပြေအောင် ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ သားသမီးလေးတွေဖြစ်လာမှာပါ။ အဲလိုမျိုး သဘာဝကိုခံစားတတ်ပြီး စိတ်သဘောထားပျော့ပျောင်းသွားတဲ့သူမျိုးက ကြမ်းတမ်းရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ ရိုင်းစိုင်းသူဖြစ်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်း ပြေလျော့ပြီးသားလည်းဖြစ်၊ ယဉ်ကျေးလိမ္မာတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေလည်း ဖြစ်အောင် ပျိုးထောင်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့။ ကျောင်းစာအပြင် တခြားသောသင်တန်းတွေအတွက် ကျောင်းသားလူငယ်တွေကို အချိန်စီမံပေးဖို့ မိဘများမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အချိန်ကို စနစ်တကျစီမံပေးနိုင်မှသာ ဖိစီးမှုကင်းဝေးမှာဖြစ်ပြီး တိုးတက်သင့်သလောက်တိုးတက်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ #BAWA101
ပျော်ရွှင်သောဘဝ လူနေမှုဘဝ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား
ငွေများ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်စေသည့် အကြောင်းအရင်း ၁၂ မျိုး
လက်ထဲမှာ ဒီနေ့ပဲလစာထုတ်လာတယ်……ဒီနေ့ပဲ သားရေကွင်းပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်ဖူးတယ်မလား။ ကြားလည်း ကြားဖူးကြမှာပါနော်။ ဘာအကြောင်းရင်းတွေကြောင့် အဲလိုမျိုးဖြစ်သွားရတာလဲလို့ အကြောင်းရင်းကိုစဉ်းစားမိဖူးရဲ့လား။ အကြောင်းရင်းတွေထဲက သေချာသလောက်ဖြစ်နိုင်မယ့် အကြောင်းရင်းကို ရေးပေးထားပါတယ်နော်။ #BAWA101
အောင်မြင်နေသော စီးပွားရေးသမားများတွင်တွေ့ရသော ပိုက်ဆံနှင့်ပါတ်သက်သည့် အလေ့အကျင့် ဓလေ့စရိုက်များ
အောင်မြင်နေသော စီးပွားရေးသမားများမှာ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအလေ့အကျင့်ကောင်းတွေရှိနေသလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ လူတိုင်းလိုလိုက လိုချင်တပ်မက်စရာတွေနောက်ကိုလိုက်ရင်း ငွေတွေကို မသုံးချင်ဘဲ သုံးမိ၊ ရှာသလောက်မလောက်ငတာမျိုးတွေ ပိုပြီး ကြုံနေကြတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီ့တော့ အောင်မြင်သူတွေနဲ့ ကိုယ်တွေနဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာခြားနားချက်တွေကို လေ့လာကြည့်ပြီး ဆင်ခြေစရာလေးတွေ ဆင်ခြင်လို့ရအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ၁) ငွေကြေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရည်မှန်းချက်သတ်မှတ်ထားတတ်ပါတယ်။ ဒီတစ်လမှာ ငွေဘယ်လောက်စုမယ်၊ ဆိုတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတ်မှတ်ချက်မျိုး သတ်မှတ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ ၂) ခြိုးခြံချွေတာတတ်ကြပါတယ်။ ခြိုးခြံချွေတာတာနဲ့ ကပ်စေးနှဲတာ မတူပါဘူးနော်။ မကုန်သင့်တဲ့နေရာမကုန်အောင် ထိန်းသိမ်းပြီး သုံးတာက ခြိုးခြံချွေတာတာပါ။ သုံးသင့်တဲ့နေရာလည်း မသုံးချင်၊ ကုန်သင့်တဲ့နေရာမျိုးမှာလည်း မကုန်ချင်တာကတော့ ကပ်စေနှဲတာပါ။ အောင်မြင်သူတွေက ကပ်စေးမနှဲပါဘူး၊ သုံးသင့်တဲ့နေရာမှာ သုံးပေမယ့် မသုံးသင့်တဲ့နေရာမျိုးကျ အကုန်အကျသက်သာအောင် ခြိုးခြံတတ်ကြပါတယ်။ ၃) ဦးစားပေးသင့်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကို သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ငွေဆိုတာကတော့ မစဉ်းစားဘဲ သုံးပစ်လိုက်ရင် သုံးစရာနေရာတွေချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တကယ်ကုန်ကျသင့်တဲ့နေရာမျိုးကို ဦးစားပေးလိုက်ရင် မကုန်သင့်တဲ့နေရာတွေမှာ ကုန်ကျတာ လျော့ပါးသွားနိုင်ပါတယ်။ အောင်မြင်သူတွေက ထိုသဘောတရားကို ကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချတတ်ပါတယ်။ မကုန်မဖြစ် ဦးစားပေးရမယ့်နေရာမျိုးမှာ ကုန်ကျစရိတ်ကို သတ်မှတ်ထားတတ်ပါတယ်။ ၄) ) အသုံးစရိတ်တွေ သတ်မှတ်ထားတတ်ပါတယ်။ တစ်လကို ဘယ်လောက်သုံးမယ်ဆိုတဲ့ အသုံးစရိတ်သတ်မှတ်ချက်မျိုး ထားတတ်ကြပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏအတွင်း သုံးတတ်သွားတဲ့အခါ အပိုငွေတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်။ အသုံးစရိတ်မသတ်မှတ်ထားရင် ဘာအတွက်ဘယ်လိုသုံးဖြစ်မှန်းတောင်မသိလိုက်ရဘဲ လက်ထဲရှိရင်ရှိသလောက် ကုန်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောင်မြင်သူတွေကတော့ သူတို့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့အသုံးစရိတ်အတွင်းမှာသာ သုံးဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်လစာအသုံးစရိတ်ဘယ်လောက်ရှိမှန်း တွက်ချက်နိုင်ကြပါတယ်။ ၅) ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အမြဲလေ့လာသင်ယူတတ်ပါတယ်။ ငွေကြေးတွေ အရမ်းသုံးမိနေတတ်သလား၊ ငွေကြေးတွေ အဝင်အထွက်မမျှဘူးဖြစ်နေသလား၊ စုငွေကနည်းနေသလား၊ ရင်းနှီးငွေက ဘယ်လောက်၊ အမြတ်ငွေက ဘယ်လောက်စသည်ဖြင့် သူတို့မှာက အမြဲစာရင်းဇယားနဲ့ ရှိပါတယ်။ ပြန်လည်သုံးသပ်တတ်ကြသလို သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လည်း ဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုသင်ယူရမလဲဆိုတာ နားလည်ကြပါတယ်။ သူတို့ထက်ပိုပြီး အောင်မြင်သူတွေက ဘယ်လိုစနစ်တကျအသုံးချနေသလဲဆိုတာမျိုးလည်း အမြဲနားစွင့်ပြီး မေးမြန်းသင်ယူတတ်ကြပါတယ်။ ၆) ပုံမှန်စုဆောင်းတတ်ကြပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံတတ်ပါတယ်။ အောင်မြင်သူတွေက ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျှော်အမြင်ရှိကြပါတယ်။ ဒီနေ့ဘယ်လောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသင့်လဲ၊ ဘယ်လောက်စုဆောင်းမလဲ။ စုဆောင်းထားတာတွေကို ဘယ်လိုပြန်အသုံးချဖို့လဲ။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းက ဘာအကျိုးတွေပြန်ရမှာလဲ စသည်ဖြင့် ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေရှည်ကို ကြိုတင်လှမ်းမျှော် စီစဉ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အောင်မြင်သူတွေမှာ ပုံမှန်စုဆောင်းငွေရှိတတ်ကြပြီး ပုံမှန်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလည်းရှိကြပါတယ်။ ၇) ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနိုင်တဲ့အစွမ်းအစရှိကြပါတယ်။ အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေက သမရိုးကျအတိုင်း အလုပ်သွား၊ လစာရ ဆိုပြီး ပုံမှန်လိုဝင်လာမယ့်ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကို စောင့်မျှော်နေတတ်ကြသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့မှာ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အိုင်ဒီယာ၊ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနိုင်တဲ့ အစွမ်းအစရှိကြပါတယ်။ ပြောချင်တာက လစဉ်ရမယ့်လစာရှိမယ်ဆိုရင် လစာအပြင်တခြားဘယ်နည်းလမ်းနဲ့ ငွေကိုရှာနိုင်သေးလဲ (မတရားသောနည်းလမ်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ) ဆိုတာမျိုးကို သူတို့က သိကြပါတယ်။ ၈) ရှာနိုင်တာထက် ပိုပြီး မသုံးတတ်ကြပါဘူး အောင်မြင်သူတွေက ဝင်ငွေထွက်ငွေကို မျှတအောင် ညှိတတ်ကြပါတယ်။ တစ်လဝင်ငွေထက် ပိုပြီး သုံးခြင်းကို စိတ်မဝင်စားကြပါဘူး။ ဘာလို့ဆို အောင်မြင်သူတွေအတွက် အကောင်းစားတွေဝတ်၊ အကောင်းဆုံးတွေ ဆင်ယင်ထားခြင်းက မလိုအပ်တဲ့အသုံးစရိတ်တွေဆိုတာ သူတို့က ပိုနားလည်ကြပါတယ်။ ငွေတွေကို ဖောဖောသီသီသုံးခြင်းက ကိုယ်တိုင်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုစုဖို့ကြိုးစားတာနဲ့ ပိုပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်ခြင်းက ကိုယ်တိုင်အတွက် နောင်တချိန်ရလာမယ့်အသီးအပွင့်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူတို့က သိကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့က ဘယ်တော့မှ ရှာနိုင်တာထက် ပိုမသုံးဘဲ၊ ထပ်ပြီးရှာဖို့နဲ့ ထပ်စုဖို့ ထပ်ပြီးရင်းနှီးဖို့ပဲ စဉ်းစားကြပါတယ်။ အထက်ပါအချက်တွေကတော့ အောင်မြင်သူတွေလုပ်လေ့ရှိတဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေပါ။ အဲဒီ့အကျင့်တွေကို ဆွဲကိုင်ကျင့်သုံးရင်း သူတို့ဘဝတွေက အောင်မြင်သထက်အောင်မြင်လာကြတာပါ။ စာဖတ်သူတွေလည်း နမူနာယူပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေ။#BAWA101
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လောင်းကစားအသည်းအသန် မက်တဲ့သူမျိုးမြင်ဖူးမှာပါ။ လောင်းကစားကို နှစ်သက်ခုံမင်နေသူဆိုရင် လောင်းကစားကိုဘယ်သူကမှ ဖြတ်ပေးလို့မရသလို၊ ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့မှ ပြတ်အောင်လုပ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်ကိုယ်တိုင်ကိုက တကယ်ပြတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။ ၁) ကိုယ့်စိတ်ကိုထိန်းပါ။ လောင်းကစားကြောင့် ဘဝတွေပျက်ရတယ်၊ အကြွေးတွေတင်နေပါတယ် စိတ်ညစ်လို့တကယ်ပြတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေး အမှန်တကယ်ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်။ အဲဒီ့တော့ သင့်ကိုသင် လောင်းကစားတကယ်ပြတ်ချင်ရင် လောင်းကစားဆိုတဲ့အသံကြားတာနဲ့ ထပြီးထိပ်ဆုံးက မလောင်းမိဖို့ သတိပေးပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ထိန်းပါ။ ၂) လောင်းကစားပတ်ဝန်းကျင်ကို ဝေးဝေးရှောင်ပါ။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှကို ယောင်လို့တောင် အနားမသွားမိပါစေနဲ့။ အသံကြားတာနဲ့ ယွစိစိဖြစ်နေတဲ့ သင့်စိတ်ကိုထိန်းပါ။ ကြည့်ရုံကြည့်မှာပါ……လို့တွေးလိုက်တာနဲ့ သင့်စိတ်က ၅၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြန်စိတ်ပါဖို့သေချာနေပါပြီ။ အဲဒီ့တော့ လောင်းကစားလုပ်မိဖို့လွယ်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လောင်းကစားလုပ်တတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှောင်၊ လောင်းကစားလုပ်ဖို့ဆွယ်တဲ့အပေါင်းအသင်းကိုရှောင်ရပါမယ်။ ၃) နည်းနည်းလေးပဲလုပ်မှာပါ ဆိုတဲ့စိတ်ကို လုံးဝဖျောက်ပါ။ အရင်လိုဘဝပျက်အောင်၊ အကြွေးတွေတင်အောင်မလုပ်တော့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းလောက်တော့ လုပ်အုံးမယ် ဆိုရင်တော့ သင်ဘယ်တော့မှ ဒီနွံထဲကလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လောင်းကစားက အရက်လို နည်းနည်းချင်း မျှင်းဖြတ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်တာကို မှတ်ထားပါ။ နည်းနည်းလောက်လုပ်စ ရှိရင် များများပြန်ဖြစ်လာတာပါပဲ။ အဲဒီ့တော့ လောင်းကစားကို လုံးဝကိုအစပြန်မလုပ်မှ ရမှာပါနော်။ ၄) ကိုယ်ကိုကိုယ် သတိပေးနေပါ။ အမြဲ သင့်ကိုသင် alrm လုပ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ လောင်းကစားလုပ်ဖို့ ဆွယ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တိုင်ကိုက လောင်းကစားလုပ်ဖို့ တွေးမိနေရင်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိပေးပါ။ “လောင်းကစားလုံးဝမလုပ်တော့ဘူး……..လောင်းကစားလုံးဝမလုပ်တော့ဘူး” ဆိုတဲ့စကားကို စိတ်ထဲကနေ ထပ်တလဲလဲ ရေရွတ်ပါ။ စိတ်က အဲဒီ့အပေါ်အာရုံစိုက်မိရင် လောင်းကစားအပေါ်အာရုံမေ့သွားပါလိမ့်မယ်။ ၅) ဦးနှောက်ကို အလုပ်ပေးနေတာတစ်ခုခုလုပ်ပါ။ လောင်းကစားသမားတော်တော်များများက အလုပ်မရှိတာတွေ့ဖူးပါတယ်။ အလုပ်ရှိရက်နဲ့ လောင်းကစားလုပ်သူရှိရင်လည်းရှိမှာပါ….အကြမ်းဖျင်းပြောရရင်တော့ လောင်းကစားသမားတွေက အလုပ်မရှိတော့ ငွေရမယ့်အလွယ်နည်းကို ရှာရင်း လောင်းကစားလုပ်မိသွားတာမျိုးပါ။ အဲဒီ့တော့ စိတ်ကိုအားနေအောင်မထားပါနဲ့၊ ဦးနှောက်ကို ချက်စ် ဆော့တာမျိုး၊ ဂိမ်းဆော့နေတာမျိုး တစ်ခုခုလုပ်လိုက်ပါ။ လောင်းကစားကို စိတ်ရောက်မိတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့။ ၆) အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါ။ အလုပ်မရှိလို့ ငွေကို အလွယ်နည်းနဲ့လိုချင်လို့ လောင်းကစားဝိုင်းတွေချည်းသွားမိနေတယ်ဆိုရင် အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါ။ ကိုယ့်အတွက် ငွေလည်းရ အာရုံလည်းပြောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်အောင်ပါ။ အလုပ်ကပြန်လာတာနဲ့ တခြား ဝါသနာပါရာတစ်ခုခုကိုလုပ်နေလိုက်ပါ။ ၇) အာရုံပြောင်းပစ်ပါ။ တစ်ချို့ကျတော့ အလုပ်လုပ်တယ်။ ရလာသမျှ ငွေတွေကို လောင်းကစားဝိုင်းမှာ သွားပြီး ဆော့ကြတာတွေ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုက အပြောသာရှိပြီး လက်တွေ့မရှိလို့ပါ။ ပြီးတော့ ပိုက်ဆံရလာတာနဲ့ လောင်းကစားသွားလုပ်မယ့်အာရုံကို လက်ခံထားလို့ပါ။ သင်ကတကယ်ဖြတ်ချင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ လောင်းကစားလုပ်ချင်စိတ်ပေါ်လာတိုင်း တခြားကို အာရုံပြောင်းပစ်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ခါပေါ်လာတိုင်းတစ်ခါ မရရအောင်ဖျောက်မယ်စိတ်ထားပါ၊ အခါခါပေါ်လာတိုင်း အခါခါဖျောက်ပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကို နိုင်အောင်ထိန်းနိုင်မှသာ ဘယ်နေရာမှမဆို တိုးတက်နိုင်မယ့်သူဖြစ်လာမှာပါ။ စိတ်အလိုလိုက်ပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်ရင်တော့ ဘယ်တော့မှ မတိုးတက်နိုင်ပါဘူး။ အထက်ပါအချက်တွေကို ဖော်ပြပေးထားပေမယ့် ကိုယ်တိုင်တကယ်လုပ်ကြည့်ပြီး တကယ်ကို စိတ်ပိုင်းဖြတ်နိုင်မှ ပြတ်မှာပါ။ လောင်းကစားကို နိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင် အကျင့်လုပ်ပြီး မွေးမြနိုင်မှ လောင်းကစားအကျင့်က ပျောက်မှာပါ။ အားလုံးပဲ လောင်းကစားနဲ့ကင်းပါစေ။
အပျော်အပါးလိုက်စားခြင်းက ဘယ်လိုမျိုးဘဝတွေကိုပျက်စေနိုင်ပါသလဲ၊ တော်တော်များများက သိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် တစ်ချို့ကသတိမမူတတ်ကြပါဘူး။ အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ယောက်က မိန်းမလိုက်စားလိုက်တဲ့အခါ အဲဒီ့အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ယောက်တည်းရဲ့ဘဝတစ်ခုတည်း ပျက်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအိမ်ထောင်ဦးစီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မိသားစုဝင်အားလုံးရဲ့ဘဝတွေပါ ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဦးစီးတော့မဟုတ်ဘူး ……ကိုယ်တွေက တစ်ယောက်တည်းသမားမို့ မိန်းမလိုက်စားတယ်၊ ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့များမထင်ပါနဲ့။ သင့်ဘဝကို သင်ကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးပစ်နေတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ အဲဒါအပြင် သင့်က တကယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်သဘောကျလို့ လက်ထပ်ယူမယ့်အမျိုးကောင်းသမီးတွေ့လာတဲ့အခါ သင့်ကပါ သူ့ကို ဖျက်ဆီးသွားတဲ့တရားခံတောင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်နော်။ အဲဒါအပြင် သင့်ရဲ့အနေအထိုင်မဆင်ခြင်မှုက သင့်ရဲ့မိဘ၊ ဆွေမျိုးအပေါင်းအသင်းတွေကိုတောင် ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါပြီ…..မိန်းမလိုက်စားရုံလောက်နဲ့များ ဘာလို့ဘဝတွေအများကြီး ပျက်စီးရမှာလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ အဓိက ပျက်စီးစေမယ့်အကြောင်းရင်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအုံး။
သစ်ပင်စိုက်ခြင်းက ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဘယ်လောက်အကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာ ပြောဖို့တောင်လိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ ဒီနေ့ခေတ်လို့ အရမ်းတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေ၊ ညစ်ညမ်းမှုတွေ ပိုလို့တောင်ဖြစ်လာပါသေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် အပင်တွေပိုပြီး စိုက်ပျိုးသင့်ပါတယ်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာရခြင်းကလည်း အပင်တွေဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့်ပါ။ အပင်စိုက်ခြင်းအကျိုးကို သေချာလေးသိရအောင် ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁) အပင်တွေက ရာသီဥတုကို ပြောင်းလဲခြင်းကို အံတုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာ့လေထုမှာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့တွေများပြားလာမှုကြောင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာရပါတယ်။ အပင်တွေက ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို စုပ်ယူထားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို သိုလှောင်ထားပြီး အောက်ဆီဂျင်ကိုပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ တစ်နှစ်မှာ တစ်ဧကခန့်ရှိတဲ့သစ်ပင်တွေက သင့်ရဲ့ကားမိုင်ပေါင်း ၂၆၀၀၀ မိုင်မောင်းနှင်ပြီးထွက်လာတဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ပမာဏတွေကို စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ၂) အပင်တွေက လေထုကို သန့်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ် မကောင်းတဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေကို သူတို့ရဲ့အရွက်တွေနဲ့ ပင်စည်က စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမိုးနီးယား၊ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုက်၊ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်၊ အိုဇုန်း စသည့်ဓာတ်ငွေ့တွေကို စုပ်ယူတဲ့အတွက် လေထုကို သန့်ရှင်းသွားစေနိုင်ပြီး သန့်စင်သွားအောင်လည်း စစ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၃) အပင်တွေက အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုပေးပါတယ်။ တစ်နှစ်မှာ တစ်ဧကခန့်ရှိတဲ့အပင်တွေကနေ လူပေါင်း၁၈ယောက်အတွက် အောက်ဆီဂျင်လုံလုံလောက်လောက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၄) အပင်တွေက မြို့တွေ၊ လမ်းတွေကို အေးချမ်းစေပါတယ်။ Los Angeles မြို့မှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ငါးဆယ်ခန့်ကတည်းက ပျမ်းမျှအပူချိန်ထက် ၆ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် မြင့်တက်လျက်ရှိပါတယ်။ အပင်တွေက အုပ်လွှမ်းပြီး လမ်းတွေ အိမ်တွေကို အပူဒဏ်ကနေကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ အိမ်တွေနဲ့လမ်းတွေကို တစ်ဆယ်ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိ အေးစေပါတယ်။ သစ်ပင်ရဲ့ အရွက်တွေကတဆင့် လေထုထဲကို ရေငွေ့တွေထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ ၅) အပင်တွေက စွမ်းအင်တွေမဆုံးရှုံးအောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အိမ်တစ်အိမ်မှာ နွေရာသီပူပြင်းမှုကို ကာကွယ်နိုင်အောင် လေအေးစက်အသုံးပြုခြင်းကြပါတယ်။ အပင်တွေကြောင့် လမ်းတွေအိမ်တွေကို အပူသက်သာစေတဲ့အခါ မလိုအပ်ပဲလေအေးပေးစက်မသုံးဖြစ်တော့ပါဘူး။ ထိုအခါ လေထုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေထုတ်လွှတ်မှုနည်းသွားစေပါတယ်။ စွမ်းအင်တွေလည်း အလဟသမကုန်တော့သလို လေထုလည်းမညစ်ညမ်းနိုင်တော့ပါဘူး။ ၆) ရေကုန်ဆုံးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ အပင်တွေက ရတဲ့အရိပ်ကြောင့် ရေလိုအပ်နေတဲ့ မြက်ခင်းတွေမှာ ရေငွေ့ပျံခြင်းကို သက်သာစေပြီး မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များမှ ရေငွေ့ပျံခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ လောလောလတ်လတ်စိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်သစ်လေးတွေက တစ်ပတ်မှာ ရေ ငါးဂါလံလောက်ပဲလိုအပ်ပါတယ်။ သစ်ပင်တွေကနေ ရေငွေ့တွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ကမ္ဘာ့လေထုကို ပြန်ပြီးစိုစွတ်စေပါတယ်။ ၇) ရေထုညစ်ညမ်းခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ အပင်ရဲ့ပင်စည်ကနေ ရေတွေက အပင်ရဲ့အောက်ခြေမြေကြီးတွေထဲကို ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒါက အညစ်အကြေးတွေကို ပင်လယ်ထဲအရှိန်ပြင်းပြင်းစီးဆင်းတာမျိုးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်တွေအတွက် ဖြန့်ကျဲထားတတ်တဲ့ သစ်ရွက်ဆွေးတွေ ၊ ကောက်ရိုးဆွေးတွေကိုလည်း သဘာဝအရ ရေမြုပ်ပုံစံလိုမျိုး စစ်ထုတ်ပေးနိုင်အောင် အပင်တွေရဲ့ အမြစ်တွေက ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါအပြင် မြေအောက်ရေပြန်လည်ရရှိအောင် ပြန်လည်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ၈) မြေတိုက်စားခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ တောင်ခါးပန်းတွေလိုနေရာမျိုး၊ စမ်းချောင်းတွေစီးဆင်းနေတဲ့ ကုန်းလျှောမြေလိုနေရာမျိုးတွေမှာ ရှိတဲ့အပင်တွေက မြေကြီးတွေကို တိုက်စားမှုမဖြစ်အောင် အမြစ်တွေနဲ့ ကုတ်တွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မြေတိုက်စားခြင်း၊ မြေပြိုခြင်းတွေ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ၉) ကလေးတွေကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အရေပြားကင်ဆာက အဖြစ်များဆုံးရောဂါတစ်ခုထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ အပင်တွေက နေရောင်ခြည်မှ UV B နဲ့ထိတွေ့နရခြင်းမှ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ ကစားကွင်းတွေနဲ့ ကျောင်းဝင်းတွေမှာ အပင်တွေနဲ့ အရိပ်ရနေအောင် စီမံထားသင့်ပါတယ်။ ၁၀) အစားအစာတွေကို စီမံပေးနိုင်ပါတယ်။ ပန်းသီးပင်တစ်ပင်က ပန်းသီးပေါင်း တစ်နှစ်မှာ ရှစ်ဂါလံဝင်တဲ့ တင်းတောင်းပေါင်း ၁၅ - ၂၀ လောက်ထိ ထွက်နိုင်ပါတယ်။ အပင်တွေက လူတွေအတွက် စားစရာအသီးအနှံတွေသာမက ငှက်တွေနဲ့ သားရဲတိရစ္ဆာန်တွေအတွက်လည်း စားစရာဖန်တီးပေးပါတယ်။ ၁၁) ရောဂါတွေကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ပြတင်းပေါက်မှာ အပင်တွေ အမြဲစိမ်းစိုနေတာမြင်တွေ့နေတတ်တဲ့ လူနာတွေက အမြန်ဆုံးရောဂါပျောက်ကင်းနိင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Attention Deficit Hyperacitivity Disorder (ADHD) ရေဂါဝေဒနာရှင် ကလေးသူငယ်တွေမှာ သဘာဝတရားကို လက်ခံရတဲ့အခါ ရောဂါလက္ခဏာတွေလျော့နည်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သစ်ပင်တွေနဲ့ ထိတွေ့ခြင်း၊ သဘာဝတရားကိုလက်ခံရခြင်းက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမောပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။ ၁၂) ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို လျှော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ အိမ်အနီးဝန်းကျင် အိမ်အတွင်းအပြင်ကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရောက်ရှိခြင်း ဒဏ်မှ လျှော့ကျစေပါတယ်။ အပင်တွေနဲ့ သဘာဝရှုခင်းတွေကြောင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဓာတ်များပြားစွာ ကျရောက်ခြင်းဒဏ်ကို ကြောက်လန့်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အထက်ပါအချက်တွေက အပင်တွေကို စိုက်ပျိုးခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းစိုနေစေဖို့ အားလုံးပဲ အပင်တွေစိုက်ပျိုးသင့်ပါတယ်နော်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အပင်လေးတွေ စိုက်ပျိုးခြင်းကြောင့် မိမိကိုယ်တိုင်သာမက အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကော နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ အကျိုးရှိနေစေမှာပါ။ https://www.treepeople.org/tree-benefits ၁၄) သစ်ပင်စိုက်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ သစ်ပင်စိုက်ခြင်းက ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဘယ်လောက်အကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာ ပြောဖို့တောင်လိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ ဒီနေ့ခေတ်လို့ အရမ်းတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေ၊ ညစ်ညမ်းမှုတွေ ပိုလို့တောင်ဖြစ်လာပါသေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် အပင်တွေပိုပြီး စိုက်ပျိုးသင့်ပါတယ်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာရခြင်းကလည်း အပင်တွေဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့်ပါ။ အပင်စိုက်ခြင်းအကျိုးကို သေချာလေးသိရအောင် ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁) အပင်တွေက ရာသီဥတုကို ပြောင်းလဲခြင်းကို အံတုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာ့လေထုမှာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့တွေများပြားလာမှုကြောင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာရပါတယ်။ အပင်တွေက ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို စုပ်ယူထားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို သိုလှောင်ထားပြီး အောက်ဆီဂျင်ကိုပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ တစ်နှစ်မှာ တစ်ဧကခန့်ရှိတဲ့သစ်ပင်တွေက သင့်ရဲ့ကားမိုင်ပေါင်း ၂၆၀၀၀ မိုင်မောင်းနှင်ပြီးထွက်လာတဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ပမာဏတွေကို စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ၂) အပင်တွေက လေထုကို သန့်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ် မကောင်းတဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေကို သူတို့ရဲ့အရွက်တွေနဲ့ ပင်စည်က စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမိုးနီးယား၊ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုက်၊ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်၊ အိုဇုန်း စသည့်ဓာတ်ငွေ့တွေကို စုပ်ယူတဲ့အတွက် လေထုကို သန့်ရှင်းသွားစေနိုင်ပြီး သန့်စင်သွားအောင်လည်း စစ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၃) အပင်တွေက အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုပေးပါတယ်။ တစ်နှစ်မှာ တစ်ဧကခန့်ရှိတဲ့အပင်တွေကနေ လူပေါင်း၁၈ယောက်အတွက် အောက်ဆီဂျင်လုံလုံလောက်လောက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၄) အပင်တွေက မြို့တွေ၊ လမ်းတွေကို အေးချမ်းစေပါတယ်။ Los Angeles မြို့မှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ငါးဆယ်ခန့်ကတည်းက ပျမ်းမျှအပူချိန်ထက် ၆ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် မြင့်တက်လျက်ရှိပါတယ်။ အပင်တွေက အုပ်လွှမ်းပြီး လမ်းတွေ အိမ်တွေကို အပူဒဏ်ကနေကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ အိမ်တွေနဲ့လမ်းတွေကို တစ်ဆယ်ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိ အေးစေပါတယ်။ သစ်ပင်ရဲ့ အရွက်တွေကတဆင့် လေထုထဲကို ရေငွေ့တွေထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ ၅) အပင်တွေက စွမ်းအင်တွေမဆုံးရှုံးအောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အိမ်တစ်အိမ်မှာ နွေရာသီပူပြင်းမှုကို ကာကွယ်နိုင်အောင် လေအေးစက်အသုံးပြုခြင်းကြပါတယ်။ အပင်တွေကြောင့် လမ်းတွေအိမ်တွေကို အပူသက်သာစေတဲ့အခါ မလိုအပ်ပဲလေအေးပေးစက်မသုံးဖြစ်တော့ပါဘူး။ ထိုအခါ လေထုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေထုတ်လွှတ်မှုနည်းသွားစေပါတယ်။ စွမ်းအင်တွေလည်း အလဟသမကုန်တော့သလို လေထုလည်းမညစ်ညမ်းနိုင်တော့ပါဘူး။ ၆) ရေကုန်ဆုံးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ အပင်တွေက ရတဲ့အရိပ်ကြောင့် ရေလိုအပ်နေတဲ့ မြက်ခင်းတွေမှာ ရေငွေ့ပျံခြင်းကို သက်သာစေပြီး မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များမှ ရေငွေ့ပျံခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ လောလောလတ်လတ်စိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်သစ်လေးတွေက တစ်ပတ်မှာ ရေ ငါးဂါလံလောက်ပဲလိုအပ်ပါတယ်။ သစ်ပင်တွေကနေ ရေငွေ့တွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ကမ္ဘာ့လေထုကို ပြန်ပြီးစိုစွတ်စေပါတယ်။ ၇) ရေထုညစ်ညမ်းခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ အပင်ရဲ့ပင်စည်ကနေ ရေတွေက အပင်ရဲ့အောက်ခြေမြေကြီးတွေထဲကို ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒါက အညစ်အကြေးတွေကို ပင်လယ်ထဲအရှိန်ပြင်းပြင်းစီးဆင်းတာမျိုးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်တွေအတွက် ဖြန့်ကျဲထားတတ်တဲ့ သစ်ရွက်ဆွေးတွေ ၊ ကောက်ရိုးဆွေးတွေကိုလည်း သဘာဝအရ ရေမြုပ်ပုံစံလိုမျိုး စစ်ထုတ်ပေးနိုင်အောင် အပင်တွေရဲ့ အမြစ်တွေက ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါအပြင် မြေအောက်ရေပြန်လည်ရရှိအောင် ပြန်လည်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ၈) မြေတိုက်စားခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ တောင်ခါးပန်းတွေလိုနေရာမျိုး၊ စမ်းချောင်းတွေစီးဆင်းနေတဲ့ ကုန်းလျှောမြေလိုနေရာမျိုးတွေမှာ ရှိတဲ့အပင်တွေက မြေကြီးတွေကို တိုက်စားမှုမဖြစ်အောင် အမြစ်တွေနဲ့ ကုတ်တွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မြေတိုက်စားခြင်း၊ မြေပြိုခြင်းတွေ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ၉) ကလေးတွေကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အရေပြားကင်ဆာက အဖြစ်များဆုံးရောဂါတစ်ခုထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ အပင်တွေက နေရောင်ခြည်မှ UV B နဲ့ထိတွေ့နရခြင်းမှ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ ကစားကွင်းတွေနဲ့ ကျောင်းဝင်းတွေမှာ အပင်တွေနဲ့ အရိပ်ရနေအောင် စီမံထားသင့်ပါတယ်။ ၁၀) အစားအစာတွေကို စီမံပေးနိုင်ပါတယ်။ ပန်းသီးပင်တစ်ပင်က ပန်းသီးပေါင်း တစ်နှစ်မှာ ရှစ်ဂါလံဝင်တဲ့ တင်းတောင်းပေါင်း ၁၅ - ၂၀ လောက်ထိ ထွက်နိုင်ပါတယ်။ အပင်တွေက လူတွေအတွက် စားစရာအသီးအနှံတွေသာမက ငှက်တွေနဲ့ သားရဲတိရစ္ဆာန်တွေအတွက်လည်း စားစရာဖန်တီးပေးပါတယ်။ ၁၁) ရောဂါတွေကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ပြတင်းပေါက်မှာ အပင်တွေ အမြဲစိမ်းစိုနေတာမြင်တွေ့နေတတ်တဲ့ လူနာတွေက အမြန်ဆုံးရောဂါပျောက်ကင်းနိင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Attention Deficit Hyperacitivity Disorder (ADHD) ရေဂါဝေဒနာရှင် ကလေးသူငယ်တွေမှာ သဘာဝတရားကို လက်ခံရတဲ့အခါ ရောဂါလက္ခဏာတွေလျော့နည်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သစ်ပင်တွေနဲ့ ထိတွေ့ခြင်း၊ သဘာဝတရားကိုလက်ခံရခြင်းက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမောပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။ ၁၂) ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို လျှော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ အိမ်အနီးဝန်းကျင် အိမ်အတွင်းအပြင်ကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရောက်ရှိခြင်း ဒဏ်မှ လျှော့ကျစေပါတယ်။ အပင်တွေနဲ့ သဘာဝရှုခင်းတွေကြောင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဓာတ်များပြားစွာ ကျရောက်ခြင်းဒဏ်ကို ကြောက်လန့်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အထက်ပါအချက်တွေက အပင်တွေကို စိုက်ပျိုးခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းစိုနေစေဖို့ အားလုံးပဲ အပင်တွေစိုက်ပျိုးသင့်ပါတယ်နော်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အပင်လေးတွေ စိုက်ပျိုးခြင်းကြောင့် မိမိကိုယ်တိုင်သာမက အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကော နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ အကျိုးရှိနေစေမှာပါ။ https://www.treepeople.org/tree-benefits လင့်မှဘာသာပြန်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
စွမ်းရည် ကျန်းမာရေး ပျော်ရွှင်သောဘဝ လူနေမှုဘဝ ကိုးကားစာများ
မုန်းတဲ့သူ၊ ချောက်တွန်းချင်တဲ့သူတွေကြားထဲမှာ ဘဝကိုဘယ်လိုရှင်သန်နေထိုင်မလဲ။ စိတ်ကိုဘယ်လိုထားမလဲ။
သင့်ဘဝမှာလူအမျိုးမျိုးကို ကြုံဖူးမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးမှန်သမျှကို လိုလားတဲ့သူရှိသလို မကောင်းကျိုးကိုလိုလားတဲ့သူမျိုးလည်း ကြုံဖူးမှာပါ။ တစ်ချို့ကျတော့ မလိုလားရုံတင်မက ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမှန်သမျှကိုပါ ဝေဖန်တဲ့သူမျိုး၊ ရှုံ့ချတဲ့သူမျိုး၊ အကောင်းမမြင်တဲ့သူမျိုးစတဲ့လူမျိုးကိုလည်း ကြုံဖူးမှာပါ။ ကြုံလည်းကြုံရမှာပါ။ အဲဒါနဲ့တင်မကျေနပ်နိုင်သေးဘဲ ကိုယ်ကကောင်းအောင်နေရဲ့သားနဲ့ မကောင်းပါဘူးလို့ ကွယ်ရာမှာ ပြောတတ်သူမျိုးကိုလည်း ကြုံရမှာပါ။ ဟုတ်ပါပြီ……ထိုကဲ့သို့ လူမျိုးကို ကြုံလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။ သူနဲ့ တန်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုမျိုး ချက်ချင်းကို ပြန်ပေးလိုက်မှာလား။ မုန်းတဲ့သူ၊ ချောက်တွန်းချင်တဲ့သူတွေကြားထဲမှာ ဘဝကိုဘယ်လိုရှင်သန်နေထိုင်သင့်လဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်ခြင်းဖြင့် သင်ယူတတ်ရင် ရနိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေဆိုတာက အလကားစိတ်ကူးယဉ်ပြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေရဲ့ စရိုက်တွေ၊ စိတ်နေသဘောထားတွေ၊ သမိုင်းကြောင်းတွေ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကနေကိုမှ ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ပြီး အသက်သွင်းနိုင်မယ့် ဇာတ်ကောင်တွေသုံးပြီး ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေရဲ့ရင်ထဲရောက်သွားအောင် ရိုက်ပြဖန်တီးထားတာပါ။ အဲဒါကြောင့် လူတွေရဲ့စရိုက်အမျိုးမျိုး၊ စိတ်ထားအမျိုးမျိုး၊ လူနေမှုဘဝအမျိုးမျိုး စုံလင်နေအောင် မြင်နိုင်မှာပါ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်ခြင်းကြောင့် ဘာတွေသင်ယူနိုင်မလဲဆိုတာပြောပြပေးချင်ါတယ်။